Caano daateyna waa la dabo qabtaa
Markii dawladdii ku meel gaarka ahayd la dhisay, oo la magacaabey wasiirada xilka qabanaya, dadka intiisa badan ee siyaasadda waddanka xiisaynayey, horeyba waxay ka fiirinayeen listiga qolo hebel malagu darey mise laguma darin. Aniga iyo dhamaan saaxiibadey oo dumar u badan waxaa naga fajac galiyey 23kii qof ee loo doortey inay hogaamiyaan dawladda cusub inaan qof dumar ah ilaa iyo hadda la magacaabin.
Taas waxaan u aragnaa,
1. Meel ka dhac looga dhacay dumarka Somaliyeed oo halganka dheer u soo galay siday waddanka u badbaadin lahaayeen. Aqoon iyo waayo aragnimana maanta aan kaga liidan inta ruux ee wasiirnimada loo magacaabey.
2. Waan fahmi karaa oo qabiil gabar soo dooranaya ama hana matasho oranaya inay adag tahay ama aanay suurto galba ahayn, welina Somalidu aysan gaarin heerkaas ku salaysan xaqa.
Waxaanse is lahaa, maadaama arrintaas lawada ogyahay, oo ay noqotey midda kaliya ee hor istaagi karta gabar Somaliyeed oo xubin sare ka qabata xilka loo qaybsadey dib u dhiska waddanka, haddana aqoon yahanada ama aan iraahdo wax garadka meesha isugu tagey oo intooda badani yaqaanaan doorka dumarka ka qaadan karaan dib u dhiska waddanka iyo horumarintiisaba, inaysan soo hadal qaadin dumarka xilkooda waa wax aan loo dul qaadan karin, loona dul qaadan doonin ficilka noocaas oo kale ah.
Waxaa kaloo bahdilid dumarka Somaliyeed ugu filan xataa wasaaraddii horumarinta dumarka in lagu daro wasaaradaha waa la halmaamey, oo adduunka maanta dawlad aan lahayni aysan jirin. Mar baan is iri, ragga Somaliyeed inay hadlaan bay jecel yihiin, hawshana loo qabte eh, armey wasiiro ku xigeeno u magacaabaan gabdho badan.
Halkaas oo hawsha inteeda badan ay dumarka qabanayaan, magaca iyo abaal marintana (credit) uu wasiirku qaato. Hanqaraarac lug uma dhutiyo weeye xubnaha ragga la siiyey eh, kuna filan kana badan eh, waa godob haddaan labada jago ee hadhey aan dumar la siin, oo aan xaalmarina loogu darin. Waa wax ay xaq u leeyihiin, mudan yihiin, inay safka hore ka galaan halganka Somali loogu wada jiro gudaha iyo dibadaba. Aawey hadalkii Madaxweynaha Dr Abdiqassin Salaad sida cad oo qadarinta mudan uga yiri kolkii uu joogey New York " Waad arki doontaan gabdho badan oo wasiiro ah, ambasadooro ah, oo xubno sare ka qabta dawladan cusub, waxaa uu sii raaciyey cidd, sharci ama diin u diideysaana ma jirto...isagoo soo xigtey qisooyin ku saabsan dumarka muslimka ah ee adduunka ku nool iyo xilka ay ka soo qaadeen dawladahood".
Gunaanadkeyguna waa , xaqa Allaha idin waafajiyo, "Caano daateyna waa la dabo qabtaa".
Ebyan Salah ,Canada